एन्टिबायोटिक सेवनले हृदयाघातको खतरा - स्वास्थ्य - कान्तिपुर समाचार
असार २८, २०७६ अभि सुवेदी
काठमाडौँ — कीर्तिपुर केन्द्रीय क्याम्पसको नयाँ भवनको एउटा कक्षा अगाडि उभिएको छु, एमफिल अंग्रेजीको कक्षा लिन । आफूले शिक्षक भएर जीवनका दशकौं बिताएको त्यो थलो र वरपर हेरेर उभिँदा त्यही विभागमा आफूले वर्षौंअघि पढाएको ‘स्ट्रिम अफ् कन्ससनेस’ वा चेतना प्रवाह शैलीमा लेखिएको उपन्यासको पात्रजस्तै मनका प्रवाहले तरङ्गित हुन्छु ।
स्वदेश र विदेशबाट पढेका र पढ्न गएका विद्यार्थीका हिजोआज धेरै मेल–पत्रहरू आइबस्छन् ।
सबैका प्रश्न छन्, ‘अहिले विश्वविद्यालयमा के भएको त्यस्तो ?’ भन्छु, ‘यसबाट विश्वविद्यालय निस्किन्छ । मैलेचाहिँं तिमीहरूका कामलाई सम्झेर अनि अहिले अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीलाई पढाएर आफ्नो प्राज्ञिक कर्मको विश्वास कायम राखेको छु ।’
अग्नि सूत्र पनि प्रयोग गरे विद्यार्थीले विभागमा, परीक्षाका नतिजामा असन्तोष भएर । म विभागीय प्रमुख थिएँ । त्यो ब्याचका विद्यार्थीलाई अग्निहोत्री भन्ने नाम राखेंँ । अस्ति अमेरिकाबाट एकजनाले फोन गरेर आफूलाई ‘म अग्निहोत्री ब्याचको, सर’ भनेर चिनाए । एकजना अमेरिकाको अमूक राज्यमा विधायक पनि भएका छन् । त्यो बेला देशको भाषा नै अग्नि थियो । मैले अग्नि सूत्रहरू जोडेर ‘अग्निको कथा’ नाटक लेखेंँ । सुनील पोखरेलको निर्देशनमा गुरुकुल र विश्वका निकै ठाउँमा त्यो देखायौं । यो नाटकमा सहयोग गर्न तिनै अग्निहोत्रीहरू सक्रिय भए । एकाध अग्निहोत्रीलाई पीएचडी पनि गराएँ । यो एउटा विनाश होइन, आत्मवञ्चना होइन, अन्तरमन्थनको घडी थियो । हामीले प्राज्ञकर्मको मर्यादा बिगारेनौं ।
मलाई भेट्न समाजशास्त्र विभागमा अध्यापन गर्ने युवा प्रेम चलाउने आएका छन् । ती पश्चिमका, उनकै शब्दमा, ‘गाउँले’ । ६ फिट २ इन्च अग्ला जीवन्त प्राज्ञिक युवक चिन्ता लिएर मेरा अगाडि उभिन्छन् । म भावातित हुन्छु । डा. शिव रिजाल भन्छन्, ‘यी प्रेम चलाउने मार्क्सवादको पनि गहन अध्ययन गरेका व्यक्ति हुन् । केदारभक्त माथेमाले त्रिचन्द्र कलेजलाई अब यो कसैको होइन रहेछ भनेको वाक्यको प्रसङ्गबाट आरम्भ गरेर ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालय कसको हो ?’ शीर्षकको लेख तिनले नयाँ पत्रिका (२४ असार, २०७६) मा प्रकाशित गरेका छन् । कान्तिपुरका पत्रकार मकर श्रेष्ठले २७ पुस २०७५ मा पहिलोपटक यस्तो सर्भे निकालेका थिए । तिनले दुईपटक निकालेका छन् ।
चलाउनेलाई म त्यो सम्झाउँछु । थाहा पाएर उनी खुसी हुन्छन् । लगभग मकर श्रेष्ठको रिपोर्टमा उल्लेख भएका त्रिवि क्याम्पस कीर्तिपुरले गुमाउँदै गएका जमिनका खण्डकै बयान गरेका छन्, चलाउनेले । चलाउने भन्छन्, ‘यो लेखेपछि मलाई निकै आक्रामक भाष्यमा प्रतिक्रिया आएका छन् सर, आजै ।’
म फेरि झस्किन्छु, त्रिवि क्याम्पसको भूमि र परिवेश पनि अब यहाँका प्राज्ञिकहरूका निम्ति त्रासको विषय भयो त ? मकर श्रेष्ठको अनुभव मलाई थाहा छैन । मकर पत्रकार हुन् । चलाउने प्राज्ञिक हुन् । उनको लेखमा स्वाभाविक रूपले विश्वविद्यालयका पठन–पाठनमा आएका गिरावटको चर्चा छ । उनले उत्तरदायी प्राज्ञहरूका सिद्धान्तका पनि चर्चा गरेका छन् । चलाउने मसँग कुरा गर्दैजाँदा खुसी हुन्छन्, किनभने म एउटा आधी शताव्दीदेखि पढाउने, एमफिल र पीएचडीका विद्यार्थीसँग अन्तरंग छलफल गरिबस्ने सायद एउटा अनौठो नैरन्तर्य उनको समक्ष उभिएको छु । हिजोका कुरा गर्छु, उनका आजका कुरामाथि छलफल गर्छु ।
अनि भर्खरै ‘एकेडेमिक्स एन्ड पोलिटिकल वालो’ शीर्षकमा काठमाडौं पोस्टमा (९ जून २०१९) र अगाडि कान्तिपुरमा आफूले यहाँको विषय, थलो र पठन–पाठनका कुरामाथि लेखेका अनेकौं लेखका उनलाई प्रसङ्ग सुनाइरहन्छु । नाटक लेख्ने व्यक्ति भएकाले मलाई लाग्न थाल्छ, सायद म आफ्नै नाटकमा आफैंले रचेको सूत्रधार वा ‘कोरस’ भएको छु, जसले घटेका नाटकको चित्र ल्याउँछ, अनि आगतका गतिविधिमाथि धारणा राख्छ । तर एउटा फरक छ । नाटकको सूत्रधारले भने अनुसार विगत खुल्दै जान्छ, तर म आगतलाई धुमिल चित्रभित्र धेरै देख्न सक्तिन । विगतका अनुभव लिएर केही अनुमान भने गर्छु ।
विभागमा धेरै विद्यार्थी पढ्न आउँछन् । अनि एउटा खुसीको सम्झना हुन्छ । अंग्रेजी विभागले पछिल्लो समय प्रभाव पार्ने मिडियादेखि साहित्य, जीवन र जगतका विषयहरू पढाउने पाठ्य सामग्री जोडेर सेमिनार कक्षाको शैलीमा यो एमफिल कार्यक्रम चलाएको हो । आफू अवकाश नहुँदै सुरु भएको यो कार्यक्रम निरन्तर चलेको कुराले खुसी छु । विभागमा प्रमुखहरू पनि विद्यार्थी नै, पढाउने पनि विद्यार्थीहरू नै । म नयाँ विषयहरू पढिरहने मानिस भएकाले उनीहरू मलाई राम्ररी जान्दछन् । कहिलेकाहीं भने झसंग हुन्छु ।
निकै वर्ष बिते । के वाल्टर बेन्जामिनले भनेजस्तो इतिहास उफ्रेर आएको हुँ, कीर्तिपुरमा ? होला, किनभने इतिहासलाई म एक सुषुप्त र बिर्सिने विषय वा ‘एम्नेसिया’को रूपमा हेर्न मान्दिन । तर मेरो उद्देश्य सरल छ । झन्डै आधी शताब्दीदेखि गरेकै कर्म गर्न आएको छु । सन्दर्भहरू अलिक फरक छन् । यो अंग्रेजी विभागले प्रयोग गरेका अध्ययनको विविधता अनि यस विभागले खोलिदिएका अध्ययनमा जोडिने विषयहरू धेरैले ग्राह्य मानेका छन् । म पाठ्य सामग्री बनाएको त्यो बेलाको एउटा न्यारेटिभ जोड्छु ।
विभागमा विद्वान प्राध्यापकहरू थिए । हामीले सिलेबस परिवर्तन गर्दा ‘र्‍याडिकल’ काम गर्‍यौं । चसर र शेक्सपियरको मात्र अध्ययन, अध्यापन गर्ने एमए कार्यक्रम होइन यो भन्ने कुरा प्रमाणित गर्न सिलेबसमा आमूल परिवर्तन गर्‍यौं । अन्तरविषयक बनायौं, अध्ययन कार्यक्रम । अरु विभागका मानिस ल्याएर सहकार्य र छलफल चलायौं । जे होस्, सिलेबसमा समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, इतिहास, संस्कृति अनि कलालाई साहित्यको पाठसँग ल्याएर जोड्यौं ।
स्यामुअल पी. हन्टिङटनको ‘दक्ल्यास अफ् सिभिलाइजेसन’ किताबसमेत राखेको देखेपछि मेरा गुरु स्वर्गीय कमलप्रकाश मल्लको ‘विभागीय प्रमुख भएर यस्तो नचाहिने काम गर्ने ?’ भन्ने खप्की खाएको थिएँ । तर मलाई विभागका प्राध्यापकहरूको समर्थन र सहयोग थियो, बलियो थिएँ । संघर्ष र उपलब्धिका कथा छन् । ठाउँ नभएकाले धेरै लेख्न सक्तिन । हामी अवकाश भएपछि विभागमा युवा पुस्ताले यो अभियानलाई झन् बलियो र व्यापक बनाएर लगे ।
म भन्छु, अब यो कसको हो भनेर छुट्याउने काम युवा पुस्ताको हो । कीर्तिपुरको गुमेको जमिन फर्काउन सकिन्छ । भौतिक सम्पत्तिको लेखाजोखा गर्न सकिन्छ । तर कीर्तिपुर केन्द्रवर्ती एकेडेमियामा अर्को सूक्ष्म अनि भयानक क्षति हुँदै गएको कुरा विस्मृतिमा गएको छ, जसको छलफलै हुँदैन । विभागहरू शून्य हुँदै गए । ती विभागमा पढाउने विद्वानका माग विभागभन्दा बाहिर बढी हुँदै गए । उनीहरू देशसेवामा अनि अनुसन्धान कन्द्रहरूले प्रतिनिधित्व गर्ने काममा पनि लागे ।
निकै वर्षअघि फ्याकल्टी बोर्डको साधारण सभामा आमन्त्रित थिएँ । त्रिविले देश/विदेशमा शिक्षित गराएर योग्य बनाएका तर त्यो बेला (अहिले पनि ?) विश्वविद्यालय अनि अरु संस्थाहरू खोलेकाहरूले त्रिविलाई गाली गरेको खप्न नसकेर मैले भावात्मक र वैचारिक रूपले प्रतिवाद गर्दै भनेको थिएँ, ‘यस्तो भावना पाखण्डी हो, कृतघ्नतापूर्ण र मातृघाती हो ।’ त्रिविको विडम्बना बुझ्न यो कुरा नबिर्सौं । आफैंलाई सोधौं, हामीले विभागहरूमा पीएचडी गराउने, अनुसन्धान र पठन–पाठन अनि सभा, सेमिनार गरेर राजनीतिक चेतनालाई बल दिनेतिर कति काम गरेका छौं ? सिलेबसलाई जीवन्त बनाएर राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक उल्झनमाथि छलफल गर्ने विद्वानहरू कति तयार गर्‍यौं ? ।
स्तरीय प्राज्ञिक जर्नल विश्वविद्यालयबाट निस्कन्छन् कि मार्टिन चौतारीबाट ? हामीले आफैं स्तरीय प्राज्ञिक लेख लेखेर प्रकाशित गर्नेहरूलाई कतिको न्याय गरिआएका छौं ? लाग्छ, अहिले लगभग विखण्डनको अवस्था हो । तर यो विश्वविद्यालयमा धेरै मेधावी विद्यार्थी पढ्छन् ।
बाहिर गएर यहींको शिक्षाले नाम कमाएका छन् । विज्ञानमा त्यस्तै उपलब्धि हासिल गर्नेहरू छन् । यहाँका प्राज्ञिकहरूले विश्वका अनेकौं ठाउँमा गएर सेमिनार, अनुसन्धान र लेखनमा नाम कमाउँदै छन् । सकारात्मक पक्षमाथि राजनीतिज्ञ, नागरिक समाज, विद्यार्थी, प्राज्ञिक, सरकार सबैको ध्यान जाओस् ।
प्रेम चलाउनेसँग कुरा गर्दागर्दै उतापट्टिका रुखहरू वर्षाको सिमसिमे पानी र हावामा हल्लिन्छन् । साँझ पर्न लागेको छ । चलाउने भाइलाई भन्छु, ‘म ती हामीले विद्यार्थी हुँदा रोपेका वृक्षहरू रहेसम्म यहाँ जीवन लहराइरहेको देख्छु । त्यसपछि एमफिलको आफ्नो सेमिनार कक्षा लिन पस्छु । विषय ‘इन्टर्डिसिप्लिनरी’ छ । सेप्टेम्बर ११, २००१ अमेरिकामाथि भएको आतंककारी हमला, त्यसको रङ्गमञ्चीय सामर्थ्य र आतङ्कवादीको सिद्धान्त विषयमा छ । ‘पोस्ट–पोलिटिक्स’ वा उत्तरवर्ती राजनीतिको विषय आउँछ । हामी अहिले राजनीति र सिद्धान्तको निष्ठावानयुगमा छौं कि उत्तरवर्ती युगमा छौं ? प्रश्न उठ्छ । निष्कर्ष छ, ट्रेड सेन्टर ध्वस्त भएपछि त्यसको जगमा विशाल भवन बनेन, सफा गरेर एउटा खाली भूमि राखियो । त्यसलाई ‘जिरो ग्राउन्ड’ भनियो ।
आतङ्ककारी हारे, किनभने त्यसपछिको मानव प्रतिक्रिया सकारात्मक रह्यो । सरल भूमि, ऐक्य भावना र प्रेमले जित्यो । ‘थिएटर’ वा नाट्यको आत्मा त्यही हो, व्याख्या गर्छु ।
कीर्तिपुर क्याम्पस केवल सम्झनाको ‘जिरो ग्राउन्ड होइन’ । यो हाम्रासामु सबै किसिमले जीवन्त छ ।
प्रकाशित : असार २८, २०७६ ०९:३६